I-Virtual Earth - Geofumadas
I-Virtual Earth 3D. IMicrosoft Virtual Earth Hlalisa imephu
Kuba abahlaziyi ezininzi, sifuna ukwakha iimephu yeraster apho naliphi na iqonga reference efana Google, Bing okanye ArcGIS Imagery iyavezwa, ngokuqinisekileyo siya kuba akukho ngxaki phantse naluphi njengeqonga ufikelela kwezi nkonzo. Kodwa ukuba oko sifuna ukukhuphela loo mifanekiso kwisisombululo esihle, izisombululo ezinjenge ...
I-Google ikhishwe inguqulo entsha ye-beta yesiphequluli sayo seemaphu, kunye nezixhobo ezinomdla kakhulu. Kule meko, ukuyivuselela kufuneka wenze ikhonkco entsha! ukuya ngasekunene kwimiqondiso yovavanyo lwebhu, kwaye usebenze ukhetho. Isilumkiso sicacile, ziyimvavanyo nje ezenziwayo, ngoko ...
Google umhlaba / imephu, ezintsha, Ehlabathini elungileyo
U-Allallsoft unomxholo wesicelo esinceda ukukhuphela iifoto ezisuka kwiinkonzo ezithandwa kakhulu kwiimephu ze-intanethi. Ezi nkqubo zinguqulelo zenguqu ye-Google Image Donwnloader, endithetha ngayo phantse kwiminyaka emibini edlulileyo kwaye ukuba okwesikhashana kubonakala ngathi bayeke ukusebenza. Ulwahlulo oluphambili phakathi kwezi nkqubo ...
Google umhlaba / imephu, Ehlabathini elungileyo
Kwaphela iminyaka engaphezu kwembini ndibhalele malunga nezihloko zobuqhetseba malunga nobuchwephesha, ngokubanzi malunga nesofthiwe kunye nezicelo zayo. Namhlanje ndifuna ukuthatha ithuba lokuhlalutya oko kuthetha ukuthatha inkulumo malunga nesofthiwe, nethemba lokwenza uluvo, ukugqamisa ubunzima kunye nendlela abasabela ngayo kwingeniso yezoqoqosho kunye namazwi enza i-traffic ...
Ehlabathini elungileyo, ukuhlaziywa komfanekiso ngo-Ephreli 2009
I-Virtual Earth ihlaziya ngokukhawuleza kunokuba i-Google Earth, ngo-Matshi kuphela iphakame i-21 TB kwaye ngo-Ephreli balayishe enye imali enkulu yedatha eninzi yabo evela kwimimandla yethu yase-Hispanic. Ngale nqanaba ndingamfikela ngokukhawuleza, kuba enye ye ...
Qhagamshelana neNgcaciso yeMephu
Ngethuba elidlulileyo ndakuxelela ukuba i-Manifold inokudibanisa kwi-Google, Yahoo kunye ne-Virtual Earth. Ngoku isiqhagamshelo siphume ukudibanisa ne-Open Street Maps (OSM), esiye saqulunqwa ngokukhawuleza kwiC # ngumsebenzisi weforum ogama linguJkelly. Iindaba zavela kweliveki kwiForom yeMifanekiso, apho ...
Umhlaba ka-Google GIS asibonise
Google umhlaba / imephu, GIS asibonise, Ehlabathini elungileyo
I-Virtual Earth updates 21 TB yemifanekiso
Oku kukukhulu kangakanani inani leDatha eYilungileyo elayishile kule mihla kaMashi, kwaye amazwe aseMasia ayengashiywa; UMexico kunye neBrazil baye bafumana inzuzo enkulu. Amagama akwiNgesi, njengoko adluliselwe kwi-Virtual Earth. Ephakathi kunye neMzantsi Melika ...
Geomatics, ezinye izandi
Ngaphandle kwiphephancwadi ukuba iintsuku ezimbalwa ezedlule zapapashwa yiGeinformatics, zikhona ezinye izihloko ezipapashwe kule nyanga kwi-portal yakho ekufanelekile ukwabelana. Nangona ezinye zeentengiso zikhangeleka ngathi zixhasiwe, zinegalelo into ethile ekuhambeni phambili ukuba iteknoloji iyenayo kwaye ibeka ithoni yinto ...
ESRI GPS Magazines
Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, ezintsha, Ehlabathini elungileyo
I-Virtual Earth ihlaziya imifanekiso yeSpain
Ixesha lokugqibela saba ezininzi izixeko iSpanish abathetha ukuba kwahlaziywa yi VirtualEarth, kule meko ngo-Oktobha ubhengeze omnye uhlaziyo elikhulu, nto leyo ngokungalindelekanga wongezelela imali etyeni ka 41.07 Terabit kodwa eli xesha Spain kuphela umvuzo. Ezi zixeko zi: Barcelona Malaga Manresa Mijas Oviedo Sagunto ...
Ukuba iMicrosoft ifuna ukungena ngokungenangqondo kwihlabathi lehlabathi kunye ne-Google, kufuneka idibanise neenkampani ezikhethekileyo ze-software kwaye zenze "ingcali engaphezulu". Yiyo eyenzekayo kwimeko yokuqaliswa kwe-TrueSpace ukuhlekisa iSketchup!, Ngoku ngokuvumelana neSRI, ifuna ukufikelela kubasebenzisi be ...
ArcGIS-ESRI, Ehlabathini elungileyo
I-Microsoft ivula i-TrueSpace
Ndiyathemba isizathu esihle sokuba isiqalekiso esinokubangela amazwe kwamanye amazwe, kodwa i-shit iyinkunkuma eyenziwa yiMicrosoft nge sixhobo esinamandla esinokufumana iinyanga ezili-5 ezedlule kwiCaligari. Kwaye kutheni kubonakala sengathi iMicrosoft ihamba kwi-TrueSpace? Ewe, kuba ibonisa injongo elula yokukhuphisana ...
ImephuBuilder inika ... enye
Kubuhlungu ukubona iiprojekthi ezithakazelisayo zigqabula iimpahla zazo kwaye zamkele ukuba zihlala phantsi ... nje ezimbalwa iintsuku ezidlulileyo sichaze ubuthathaka beeprojekthi ezingahambelani nesicwangciso sokuthengisa esichengayo esinika ukuzinza. Akuyona kanye imeko yePapBuilder, iprojekthi eyazalwa ngoDisemba ka-2003, eneziphumo ezilungileyo ...
Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, Ehlabathini elungileyo
Iimpawu eziqhelanisiweyo zomhlaba, eziquka amazwe aseSpain
Ukuhlaziywa kwemifanekiso ephakamileyo ye-Virtual Earth ngoJulayi kuya kuhamba kakuhle, bekude ixesha elide ekubeni sibone ukuba iimali ezininzi zihlaziywe, kuquka amazwe aseSpeyin. Kubonakala ngathi ukunyusa kwakhe ukufumana idatha sele isebenzile nangona ininzi ithathwa kwi-UltraCam, ...
Cela amakhadi anikezela kwiMicrosoft
Kwiminyaka edlulileyo sathetha ngeendlela ezithandathu ezahlukeneyo zeenkonzo zeemephu ze-intanethi; ngoko omnye wabo kufuneka asuswe kwaye omnye abeke engozini yokuphela. I-Goodbye Cela amabalazwe Cela uzimisele ukuzinikezela, ngoku ibonisa iNdawo Ebonakalayo kwi-page yayo, engacingi ukuba iMicrosoft iyanquma ukuthenga izigidi ezincinane ...
IGoogle. Eyona nto, imfazwe inkulu
Imfazwe I-Google kunye neMicrosoft zigcina imfazwe yazo kwimiguqu ebonakalayo, bobabini bavule isicwangciso esifanayo, ukulungiselela idatha yabo yoluntu oluxhomekeke kwi-intanethi ukuhlaziywa mahhala. Kunyaka ophelileyo, i-Google ilungiselele ifomu ukwenzela ukuba abantu okanye amaziko bakwazi ukuwuzalisa, okwenza ukuba bazi ukuba babephi ... ngokucacileyo ukuba ...
Qhagamshelana neenkonzo ze-OGC
Phakathi kwamandla afanelekileyo endikubonayo i-Manifold GIS yinkqubo yokuxhuma kwi-data, zombini iGoogle Earth, i-Virtual Earth, iimephu ze-Yahoo kunye neenkonzo ze-WMS phantsi kwe-OGC imigangatho. Makhe sibone indlela yokwenza ngayo. Kule meko, ndifuna ukudibanisa indawo yaseValdemaría Street, njengoko kuboniswe kwi ...
Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, GIS asibonise, Ehlabathini elungileyo
Ezinye iifowuni ezifutshane
I-Vexcel, incediso yeMicrosoft, inikeza idatha kwi-Virtual Earth inqanyuliwe. Esi sisombululo siqinisekisa ukubonelelwa kwedatha ye-3D kunye nemifanekiso yobuncono obubhetele kunabo babonwa kwi-intanethi kwaye ingaba kwi-intraline yonxweme, ekwazi ukukhetha isixeko, urhulumente, ummandla kunye nayo yonke i-coverage. IGoogle Geo izalwe ...
Blog Umhlaba ka-Google KML egeomates My
Iiphotography, Google umhlaba / imephu, Ehlabathini elungileyo
Jonga i-lat / ende mesh kwi-Virtual Earth
I-Virtual Earth ingabonwa ngenguqu efana neGoogle Earth, kodwa kungekhona idesktop kodwa iqonga lewebhu, isebenze ukufaka i-plugin ye-3D ... inika inqaku elithile ngoba unokugunyazisa iplagin kodwa ekugqibeleni isebenza. Ngoku baye bafake ifayile ye-kml evumela ukuba ibone ingcamango yemigangatho kunye nobude bendawo nganye ...